Greenwashing: inona izany, toetra mampiavaka azy, ny fomba hahafantarana azy ary maro hafa | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 08/07/2021 12:00 | Tontolo_iainana
Ireo orinasa rehetra izay nanohana ny politikany tamin'ny fivarotana vokatra sy serivisy mifototra amin'ny fomba fiainana artifisialy dia tsy tonga dia milalao amin'ny paikadin'ny varotra. Ataovy ao an-tsaina fa ny marketing dia manana tetika isan-karazany izay ny tanjony dia ny mivarotra vokatra. ny Greenwashing midika hoe fanasana endrika maitso ary manondro ireo fomba fanao ratsy izay entin'ny orinasa sasany rehefa nanolotra vokatra izy ireo. Ity vokatra ity dia aseho ho sariaka amin'ny tontolo iainana, na dia tena tsy izy aza.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba fiasan'ny Greenwashing, ny fomba tokony hahafantaranao azy sy ny toetrany.
1 Ahoana ny fomba fiasan'ny Greenwashing
2 Fisorohana sy fankatoavana
3 Fomba hamantarana ny Greenwashing
Ahoana ny fomba fiasan'ny Greenwashing
Tsy ny orinasa rehetra no mampiasa politikan'ny vokatra etika sy ara-moraly. Ny tena tanjona dia ny mivarotra sy mahazo tombony be. Betsaka amin'ireo orinasa no mampiasa tetikady marketing maitso izay amarotany anay hevitra momba ny vokatra rehefa ny vokatra dia tsy mifanaraka amin'izay atolotra antsika. Izy io dia karazana makiazy ho an'ny mpandinika na mety ho mpanjifa hanome hevitra diso momba zavatra iray izay tsy dia manaja loatra ny tontolo iainana.
Izy io dia toy ny fivoaran'ny foto-kevitra nentin-drazana momba ny fotsifotsy sary izay nipoitra ny soatoavina kolontsaina tsara ananan'ny orinasa na andrim-panjakana izay tranga maro no tsy manana karazana etika ary manandrana manadio ny sariny fotsiny mba tsy ho very na mamerina ny mpanjifa.
Azo lazaina fa ny Greenwashing Izy io dia takatra amin'ny fampidirana ny besinimaro amin'ny hadisoana na ny fahatsapana hafa momba ny vokatra, manasongadina ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana an'ny orinasa, olona na vokatra rehefa tena tsy misy dikany na tsy mitombina. Raha tsorina, ny orinasa dia manararaotra ny fahatsapana fahalotoam-pitondran-tena ataon'ny olona manao fanjifana tompon'andraikitra amin'ny resaka serivisy sy vokatra sasany. Ireo andinin-tsoratra masina ireo dia manandrana manamafy ny tsy fitoviana etika sy fitondran-tena izay miafara amin'ny fivoaran'ny fitondran-tena iray izay, avy amin'ny fitsipika ara-tsosialy, no voakasik'izany. Ireo soatoavina ireo dia matetika miankina amin'ny faharetana sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fisorohana sy fankatoavana
Ao anatin'ny ezaka hisorohana ny Greenwashing dia ezahina ny hampitandrina ny mpanjifa sy ny orinasa momba ny paikadim-barotra samihafa izay tanterahina. Ho hitantsika ny paikady sasany anaovan'ny orinasa sasany ny fanasana Greenwashing:
Mampiasa fiteny tsy mazava izy ireo: matetika izy ireo dia teny na teny izay tsy manana famaritana mazava. Ohatra, amin'ny marika maro dia ahitantsika ilay andian-teny hoe "sakaizan'ny tontolo iainana". Tena tsy misy fototra io, satria tsy afaka ny ho naman'ny tontolo iainana ianao.
Ireo antsoina hoe vokatra maitso izy ireo dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fanadiovana tarehy. Ireo dia orinasa manolotra vokatra madio madio tanteraka amin'ny loko maitso sy ny sarin'ny natiora ary ny freshness. Na izany aza, mandritra ny famokarana sy fampiasana ireo vokatra ireo dia maloto tokoa ny rano amin'ireo renirano eo akaiky eo. Raha amin'ny kosmetika dia manome endrika fahasalamana tonga lafatra izy, raha mamokatra ireo vokatra ireo dia ilaina ny singa simika marobe mandoto ny tontolo iainana.
Sary manome sosokevitra: mazàna isika mahita vitsivitsy misy marika amin'ny sarin'ny fiaramanidina izay mamela dian-voninkazo eny amin'ny rivotra. Miharihary fa maloto ny kintana ary manandrana manafina azy amin'ny voninkazo eny amin'ny habakabaka izy ireo.
Hafatra tsy misy ifandraisany: Matetika isika dia mahita toetra ekolojika marobe amin'ny zavatra maro izay tsy misy karazana fifandraisana izany.
Miaraka amin'ny tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy: ity no lakile. Ny marika na orinasa iray dia ambara matetika ho maharitra kokoa na maintso kokoa noho ireo hafa amin'ny fomba fijeriny manokana. Ohatra, tatitra isan-taona momba ny orinasa matetika no milaza fa maharitra kokoa izy ireo na hoe maloto noho ny orinasa hafa.
Misy izany hadihadio ny vokatra iray manontolo: ohatra iray mazava tsara dia ireo zavamaniry nokleary avoakan'ny fahalotoana ambany, raha tena mampiasa solika be risika sy mandoto izy ireo raha te hahazo angovo. Tranga hafa koa ny paraky. Miezaka ny manao azy ireo ho toy ny vokatra biolojika avy amin'ilay tany izy ireo ary mampiasa ny loko manga sy ireo fonosana hahasalama azy ireo.
Fomba hamantarana ny Greenwashing
Amin'ny marika momba ny vokatra maro dia matetika izy ireo no mampiasa fiteny mampiahiahy izay misy teny na andian-teny izay miresaka tombontsoa maharitra sy tontolo iainana. Ireo fiteny ireo dia matetika mampikorontan-tsaina ka ny matihanina amin'ny indostria ihany no afaka mahatakatra. Orinasa lehibe dia mety manana fizarazarana na orinasa kely mahafeno ny fenitra momba ny tontolo iainana sy maharitra.
Mampiasa fitakiana tsy misy porofo ara-tsiantifika tohanan'ny rafitra ofisialy ihany koa izy ireo. Ireo fehezanteny toy ny "mety ho vokatra tsara indrindra" "dia azo hamarinina fa". Ireo andianteny ireo dia manandrana misoroka ny sarin'ny tontolo maloto rehetra izay ifandraisany matetika. Ny fifandraisana an-tsary no fomba mora indrindra hamantarana ny Greenwashing. Ireto ny sasany amin'ireo tolo-kevitra hamantarana ireo karazana paikady ireo.
Ho hitantsika ny ohatra sasany tena mahazatra amin'ny Greenwashing. Ireo yogourt biolojika dia tsy maintsy nanova anarana, na dia mbola betsaka aza ny olona ao an-tsaina fa mahasalama kokoa ny vokatra. Ity dia iray amin'ireo paikady marketing maitso lehibe hamitahana ny saintsika. Greenwashing iray hafa ekena dia McDonalds. Orinasa iray izay ampangaina ho manao fanao ratsy hatrany ary amin'ny fifandraisana dia manandrana mivarotra fa ny akora akorany dia azo avy amin'ny loharanom-baovao maharitra. Ho fanampin'izay, manandrana mandoko loko maitso ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana izy ireo ary navelany ny loko mena taloha izay mampiavaka azy ireo hatrany.
Ohatra iray hafa ny bioplastika izay manandrana mieritreritra fa vita amin'ny akora biolojika ny tavoahangy. Raha ny marina dia tsy izy ireo. Ho famaranana, azo lazaina fa manandrana manasa lamba maitso ny orinasa amin'ny alàlan'ny tetika fitehirizana tontolo iainana mahazatra mba hamitahana ny sain'ny olona hino fa hividy vokatra maharitra kokoa. Tena tsy mahasakana antsika tsy ampoizina ny zanak'olombelona ary tsy maintsy foanana io fomba fijery rehetra io.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe Greenwashing ianao, ny fomba hahafantarana azy sy ny toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Greenwashing: inona izany ary ahoana no hamantarana azy?